ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း မှ | MyJobs
Result page 1 for ရန်ကုန် ရှိ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း မှ
Finance Officer (The Leprosy Mission Myanmar)
As part of the TLMM Country Office Team, to work closely with the TLMM CO staff in Yangon and SRHR Access to Health funded project partner offices and implemented project under The Leprosy Mission Myanmar (TLMM). Maintain and manage day to day CASH IN and CASH OUT for SRHR Access to Health funded project in Excel Cash Register based on financi ...
Program Officer (GF- HIV prevention)
The Program Officer (Global Fund- HIV prevention) is to ensure Global Fund project activities especially HIV/AIDS prevention among the key populations integrated with C19RM activities by partner CBOs are implemented well according to the plan and are monitored and evaluated effectivel. He/she isafocal program person for partner CBOs for Tec ...
ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များ2စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 1 ဆေးဝါး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ2ယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ 1 လူမှုရေးနှင့် လုပ်အားပေး အလုပ်အကိုင်များ3သုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များ 1 အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 3
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ3အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 11